Semalt က E-Commerce SEO ၏အဓိကလက္ခဏာများကိုရှင်းပြသည်
၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အသွားအလာရယူခြင်းတို့သည်ကွဲပြားသောအရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစတိုးကိုဖွင့်ခြင်းသည်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်အင်တာနက်မှတဆင့်ဖောက်သည်များ ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းသည်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ပြိုင်ဘက်များကကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်ထားသောကြောင့်ဤပြproblemနာသည်ပြင်းထန်လာသည်။ သင်သုတေသနပြုပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ထောင်သောအခါ၊ ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကအသိအမှတ်ပြုခံရရန်လိုအပ်သည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်ဝေါဟာရများအတွက်ထိပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုရရန်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အင်္ဂါရပ်များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင် algorithms ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုပြင်ခြင်းပါဝင်သည်။
Semalt ၏ Customer Success Manager ဖြစ်သူ Jason Adler သည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌အဆင့်မြင့်ရန်သင့်အား ၀ ဘ်ဆိုဒ်များမည်သို့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမည်အကြောင်းအဖိုးတန်သောအကြံဥာဏ်များပေးသည်။
သင့်ရဲ့ meta ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖော်ပြချက်များပိုမိုဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်လုပ်ကိုင်ပါ
SEO ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာများစွာသော tools တွေကသင့်ရဲ့အားထုတ်မှုအတွက်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိရိယာတွေထဲမှာ
၁။ PicMonkey နှင့် Kraken ။ ဤကိရိယာများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းကသင့်အားဝဘ်ဒီဇိုင်းပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မြန်ဆန်မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အင်တာနက်စာမျက်နှာများရှိဓါတ်ပုံများ၏အရွယ်အစားကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
၂ ။ GetFiveStars ။ ဤကိရိယာသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိသူများအားကူညီသည်။ GetFiveStars သည်သင့်ဖောက်သည်များထံသို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်ပို့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်များကိုကြားဖြတ်ယူပြီးသင်၏အဆင့်ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။
၃။ Autopilot ။ ဤသည်သည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏အချို့သောရှုထောင့်များကိုအလိုအလျောက်ပေးနိုင်သောစျေးပေါသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းမှာရက် ၃၀ အခမဲ့အစမ်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပါရှိပြီးလစဉ်ကြေးပေးသွင်းသူ 25usd ။
4. YoRocket ။ ဒီကိရိယာသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ meta ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖော်ပြချက်များကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ဖော်ပြချက်များကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေရန်နှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိအကြောင်းအရာများကိုလမ်းညွှန်ရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Brian Dean နှင့် Backlinko တို့သည်ဤကိရိယာကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏နှုန်းထားများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ငွေပေးချေခြင်းများပြုလုပ်သည်။
5. Semalt သော့ချက်စာလုံးအကြံပြုချက်များ။ ၎င်းသည်အမြီးရှည်သော့ချက်စာလုံးများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်သော့ချက်စာလုံးရှာဖွေရေးကိရိယာဖြစ်သည်။ အင်တာနက်မှ ၀ ယ်ယူရန်စျေးဝယ်သူများအသုံးပြုသည့်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုသင့်အားပေးရာတွင်၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားစာရင်းပြုစုရန်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်သော့ချက်စာလုံးများကိုပေးနိုင်သည်။
၀ ဘ်ဆုိုဒ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် visitors ည့်သည်များ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုရရှိရန်ခက်ခဲသည်။ SEO နှင့်အတူအရာအားလုံးသည်ပိုမိုရိုးရှင်းလာပြီးမျှော်လင့်ချက်အချို့ရှိသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို SEO နည်းဗျူဟာများဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်း၊ အကြောင်းအရာရွေးချယ်ခြင်းနှင့်နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်ခြင်းများကဲ့သို့သင်၏ site ကိုအသွားအလာဖြစ်စေနိုင်သည်။ eCommerce SEO ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ထိပ်တန်းရှာဖွေရေးရာထူးများ၌ဆက်လက်ရှိနေရန်နှင့် visitors ည့်သည်အသစ်များကိုလက်ခံရန်သေချာစေရန်ထိရောက်သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။